blogspot template ၁ ခု တွေ ့ထားပါတယ်။ အရမ်း ကြိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါကြီးက HTML type ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျမ ဘလောဂ့် မှာ အဲဒီ တင်းပလိတ် ထည့်ကြည့်တယ်။ unable to save your blah blah နဲ့ပြောနေတာမို့စိတ်ညစ်ပါတယ်။ အဲဒါ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဟင်။
မျက်ဝန်းညို wrote: »
pls post with the screenshot:)
အီးဟီးဟီး လုပ်တတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် တော်တော် များများ ကြုံတွေ ့နေကြ အခက်အခဲ မျိုးပဲလေ။ တင်းပလိတ် ကုဒ်တွေကို upload လုပ်လိုက်တဲ့ အခါမှာ ... စာတန်း အနီတွေနဲ့ပေါ်လာတယ်လေ။
Edit the contents of your template. Learn more We were unable to save your template
Please correct the error below, and submit your template again. Your template could not be parsed as it is not well-formed. Please make sure all XML elements are closed properly.
အဲဒါကြီးလေ ။ ကျမ လိုချင်တဲ့ တင်းပလိတ်ကတော့ http://www.eblogtemplates.com/lonely-girl/ ။ အဲဒါလေးကို သုံးချင်လို ့ပါ။
ကဲ အစ်မရဲ့ site address နဲ့လိုချင်တဲ့ template ရဲ့ address ကိုသာပေးလိုက်ပါတော့
ကျွန်တော် blog တစ်ခုဖွင့်ပြီးစမ်းပေးပါ့မယ်